पाहुना चरा घटे- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
जाडो छल्न आउने चरालाई बाधा पर्ने गरी बढ्यो मानवीय गतिविधि
माघ ४, २०७८ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — उच्च हिमाली भेगमा चिसो बढेसँगै तराई झर्ने चराको संख्या कम भएको छ । मुलुकमै सबैभन्दा बढी पानीचरालाई जगदीशपुर तालले आतिथ्यता दिँदै आएको थियो । तर, पाहुना चरा अवलोकनका लागि उत्तम मानिने तालमा भने दुई वर्षदेखि चरा आउन घट्दै गएका छन् । सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा २३ प्रतिशत चरा घटेका हुन् । २०२२ मा ९ हजार ३ सय चरा गणना गरिएको छ ।
जाडो छल्न झर्ने चराले आफ्ना गन्तव्य परिवर्तन गरेका हुन् वा तिनीहरूको संख्या नै घटेको हो भन्नेमा पन्छीविद् गम्भीर बहसमा छन् । यस पटक पनि चराका प्रजाति घटेको पाइयो । वेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजनमा नेपालमा भइरहेको पानीचरा गणनाका राष्ट्रिय संयोजक वरिष्ठ चराविद् डा. हेमसागर बरालको नेतृत्वमा रहेको चराविद्द्वय टीका गिरी र धीरज चौधरीले चरा गणना गरेका हुन् ।
२०२१ मा यहाँ १२ हजार ६३ चरा गणना गरिएको थियो । २०२० मा यहाँ २० हजार ८ सय ७ चरा गणना गरियो । २०१९ मा १४ हजार ९ सय ८० गणना गरिएको थियो । १ सय ५७ हेक्टरको तालको पूर्वी किनारबाट गणना सुरु गरेर दक्षिणमा आएर सकेका थिए । क्षेत्र–क्षेत्र छुट्याएर डाइरेक्टर मेथडबाट चरा गणना गरिएको थियो । उनीहरूले दुई टेलिस्कोप, वाइनाकुलर र क्यामराले चरा गणना गरेका थिए । टाढाटाढाका चरा पनि उपकरणले नजिक ल्याएर गणना गरिएको थियो । नेपालमा सबैभन्दा धेरै पाहुना चरालाई आश्रय दिने ठाउँ जगदीशपुर ताल हो ।
तालमा सबैभन्दा धेरै मरुल ४ हजार २ सय ३० वटा गणना गरे । त्यसपछि सुनजुरे २ हजार ९०, बिजुलागैरी १ हजार ८५ वटा गणना गरिएको थियो । सिलसिले ९ सय ८०, राज हुट्टियाउ ७५, श्वेताँखीभौं ५५, सुइरोपुच्छ्रे ५० र नादुन ७ वटा गणना गरिएको थियो । विश्वमै दुर्लभ मानिएको कैलो टाउके हाँस २ सय ४ वटा गणना हुनु राम्रो मानिएको चराविद् गिरीले बताए । ‘३ प्रजातिका चरा ४ अंकको गणनामा देखियो,’ उनले भने, ‘दुई प्रजातिका चरा ३ अंकको गणनामा आए ।’ सिन्दुरे हाँस, सानो जलेवा, ठूलो जलेवा र खडखडे हाँस गणना गरिएको थियो । चखेवाचखेवी, बेल्चा ठुँडे, हरिहाँस, बगाले सिमकुखुरा, सुइरोठुडे, मालक र हरियो टाउकेहाँसलगायत पनि गणना गरिएको थियो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष नौ प्रजाति कम चरा गणना गरियो । गत वर्ष ४९ प्रजातिका चरा गणना गरिएकामा यस वर्ष ४० प्रजाति गणना गरिएको चराविद् गिरीले बताए । त्यसमध्ये विश्वमै दुर्लभ सारस, भुँडीफोर गरुड र कैलो टाउके हाँस गणनामा आएका थिए । चराको रङ, शरीरको बनोट र आवाज सुनेर गणना गर्ने गरिन्छ । बाइनाकुलार क्यामेरा, जीपीएस र साउन्ड रेकडरलगायतको प्रयोग गरी चराको गणना गरिएको थियो । ‘एउटै फ्लगमा हजार चरा गणना हुनु राम्रो बासस्थान मानिन्छ,’ चराविद् डा. बरालले भने, ‘तर, अन्य चरा घट्नु भने चिन्ता थपिएको छ ।’ नेपालमा एक ठाउँबाट सबैभन्दा धेरै चरा देखिने ठाउँ जगदीशपुर ताल हो । तर, दुई वर्षयता चरा घट्दै जानुले केही ल्याप्सेस देखिएको उनले बताए । त्यसलाई बेलैमा पहिचान गरेर जोगाउन सकिएन भने मुलुकको चरा पर्यटनमा राम्रो स्थान भएको जगदीशपुर संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
ताल क्षेत्र आसपास मानवीय अतिक्रमण बढेर चरा आगमन घट्दै गएको चराविद्हरू बताउँछन् । मुलुकमै आगन्तुक चरालाई राम्रो आश्रय दिइरहेको तालमा अहिले डुंगा चलाइएको छ । डुंगाका कारण चरा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । डुंगा सयर गर्न जानेहरूले चरालाई जिस्काउने र समात्न खोज्ने गर्छन् । डुंगा चढ्नेहरू चराको पछिपछि जाँदा उनीहरू त्रसित हुने गरेका हुन् ।
‘रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत ठाउँमा असुरक्षित मानवीय चहलपहल बढ्नु राम्रो होइन,’ चराविद् डा. बरालले भने, ‘त्यसले चराले उन्मुक्त वातावरण नपाउँदा जगदीशपुर असुरक्षित बन्दै गयो ।’ राम्रो चरा पर्यटनको गन्तव्य बोकेको ठाउँमा चरा घट्नु दुःखद भएको उनले बताए । त्यस्तै लुकीछिपी चराको चोरी सिकारी हुनु र ताल अव्यवस्थित पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्दा समस्या भएको चराविद् गिरीले बताए । ‘चराले बाधा व्यवधान व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘असुरक्षाले तालमा पाहुना चरा घट्ने क्रम बढेको हो ।’
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:५१
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका कर्मचारी संक्रमित
पर्सा — सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडभाड रहने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ४ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । वीरगन्जस्थित सीमामा रहेको हेल्थ डेस्क प्रमुख डा. अनिशा महतोका अनुसार डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ३० कर्मचारीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालका अंगरक्षक प्रहरी जवानमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयका २ अधिकृत पनि आइतबार संक्रमित भएका थिए । स्वास्थ्यसम्बन्धी सतर्कता नअनाउँदा यसरी कर्मचारी संक्रमित भएको हुन सक्ने डा. महतो बताउँछिन् ।
महतोका अनुसार आइतबार दिनभरि डेस्कमा ३ सय ५९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म २ सय जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनले दिनदिनै स्थिति खराब हुँदै गएकाले अत्यधिक सावधानी अपनाउनु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्ला नतिजाहरूले स्थिति खराब हुँदै गएको संकेत गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सावधानी र सतर्कता नै मुख्य अस्त्र हो ।’
डेस्कमा पुस महिनाभरिमा मात्र १ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको डा. महतोले बताइन् । ‘पुस ८ देखि दैनिक १/२ जना संक्रमित पुष्टि हुन थालेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘तर पुस २० देखि दैनिक १०/११ जना संक्रमित फेला पर्न थाले, पछिल्ला दिनमा यो क्रम झनै बढेको छ ।’
नारायणी अस्पतालमा पुस २९ गते ४७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तीमध्ये २६ पर्साका हुन् । पुस ३० गते ६४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तीमध्ये ३४ जना पर्साका हुन् ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:४०